Akụkọ - karama mmanụ
Changyou Glass bụ ọkachamara na-eweta ihe ngwọta nkwakọ ngwaahịa, na-enwe ihe karịrị afọ 15 na ahụmịhe omenala na ngwongwo iko eji emechi emechi. Otu ọhụụ, nke gunyere injinia na onye mmebe, na-arụ ọrụ nke ọma na ndị ahịa na mmepụta.
Dị ka a Chinese eduga soplaya nke iko akpa, anyị na-elekwasị anya na ijikwa dị iche iche Chinese ọkọnọ yinye izute gị mkpa. Na ọtụtụ nhọrọ ịhọrọ site na ngwaahịa gị, anyị na-agba mbọ na-enye naanị na-eri-irè ngwọta na ezi mma.
Anyị ga-achọ ịmebata gị ngwaahịa karama iko ọhụụ na ụlọ ọrụ anyị:
Kalama, Mmanụ Mmanụ Mmanụ, Nri na Mmanya Mmanya Set na 17oz / 500ml Nri Oil Container Glass Carafe, Mmanụ Ala Pour, Funnel na Labels
KLASSY SITE MAL DIS MGBE NA-EME ： Ọ nwere ike izute nri gị kwa ụbọchị (mmanụ, mmanya, na soy sauce) mkpa, na-enye gị ndụ dị mma ma dị mma. Iji mmanu wụsa karama kama ịkpụ nnukwu karama plastik na-eme ka ọ dịrị ya mfe ijikwa ma debe tebụl gị na tebụl gị ọcha, gburugburu kichin ka mma.
AKA NA AH ANDGH-OLB OLR OL IVEBỌROUR IVE Mmanụ biggest Nnukwu ọdịiche dị n'etiti karama a na karama mmanụ mmanụ ọzọ bụ spout. Ha anaghị eme mkpọtụ dị ka mgbapụta akpaaka. Ngwunye dị mfe iji mee ka ị nwee ike ijikwa mmanụ ole na-abịa site na mkpịsị aka dị mfe. Enwere ike imechi oghere nke mmanụ ahụ, nke nwere ike ịrụ nnukwu ọrụ nke akara na igbochi ahụhụ na ájá.
Ezigbo Olive mmanụ maka ụbọchị ọ bụla ndụ o 17oz ikike bụ ihe dị ka otu izu nke Kitchen mmanụ ojiji ego, n'ụzọ dị irè na-mmanụ fresh.one 18/8 igwe anaghị enye aka foneji na-enyere jupụta na mejupụta mmiri mmiri mfe enweghị leakages, mgbe niile na-edebe karama gị ọcha.
Gbanyụọ ego nke mmanụ maka nri nri ahụike ： Jiri nwayọ wụsa mmanụ iji chịkwaa ojiji nke mmanụ, gbochie mmanụ ịbanye na pan ma ọ bụ salad, ka ị wee nwee ike ijikwa mmanụ ahụ nke ọma wee mee ka ị dị ka onye isi nri ọkachamara . N'otu oge ahụ, ịnwere ike iji otu aka jide karama na-enye ihe, ma ọ nweghị ibu a na-apụghị ịnagide, usoro ergonomic.
Gburugburu ebe obibi glass iko Changyou na-agbaso nchedo gburugburu ebe obibi, na-eji karama iko dị elu, ma anyị na-eme ike anyị niile iji kpuchido ngwaahịa ahụ ka ị na-ebelata nkwakọ ngwaahịa, yabụ ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla gbasara ngwaahịa ị nwetara, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị ma anyị ga dozie okwu a na afọ ojuju gị.
Akụkụ "In-dispensable" nke kichin
E jiri ya tụnyere ndị ọzọ na-egwupụta mmanụ, onye na-eme mmanụ na-eme ka ọ dịkwuo elu na-enye gị udo nke uche.
Ihe mkpuchi dị nso anaghị ahapụ mmanụ ghe oghe mgbe niile.Nke dị mfe iji na nsị na-enweghị ntụpọ, mmeghe nke mmanụ nwere ike mechie ọnụ, nke nwere ike ịrụ nnukwu ọrụ akara na idobe ájá na ahụhụ.
Ọ dị mfe imeghe otu aka wee jide ebe ahụ mgbe ị na-awụpụ, ị nwere ike pịa isi ojii iji chịkwaa mmanụ, ọ na-enye ego kwesịrị ekwesị maka nri ka mma ma ọ gaghị adị njọ dị ka onye na-ewepụta mmanụ "na-emepe emepe"
Olulu Mmanụ Olive na Akpadoro na No-Drip Spout
Ihe nkwụsị ahụ nwere ihe nkedo roba zuru ezu, ihe oriri dị nro dị nro nwere ike ime ka nhichapụ nke karama ahụ wee gbochie nkwụsị mmiri mmiri mgbe agbajiri mmanụ ahụ. All otu iberibe roba stopa dị mfe ọcha karịa metal, ikuku imewe nwere ike ime ka mmanụ eru karị were were, na n'otu oge ahụ, anyị na-enye ihe ọzọ mmanụ wunye spout maka nnọchi. Idebe ihe niile ọcha.
Na-egbo mkpa nke Cruet Set
Mkpọ mmanụ na-etinye mmanụ na nnukwu karama mmanụ atọ (17oz) kwesịrị ekwesị maka nkesa mmiri dị mkpa (mmanụ, mmanya na soy sauce) na kichin kwa ụbọchị. N'otu oge ahụ, ngwugwu atọ dị ọnụ ala, ikike 17oz bụ ihe dị ka otu izu nke mmanụ ojiji eji ego, rụọ ọrụ nke ọma na mmanụ dị ọhụrụ.